Elephone P8 Obere, nyocha na echiche | Gam akporosis
Elephone P8 Mini, nyocha na echiche
Alfonso de Frutos | | Nyocha
Elephone Ọ bụ otu n'ime ndị nrụpụta China na-eto ngwa ngwa. Ndepụta nke njedebe ya dị ezigbo mma, anyị anwaleworị ụfọdụ n'ime ngwọta ya ma ọ hapụla anyị nnukwu mmetụta, yana uru ọ bara maka ego na-eme ka ọ baa uru ịkụ nzọ na aha a.
Ugbu a, anyị nwere ohere iwetara gị a nyochaa Elephone P8 Obere, ngwaọrụ ị nwere ike ịzụta site na Banggood maka euro 109 na ịpị ebe a na nke ahụ ga-akarị mkpa nke onye ọrụ ọ bụla.
2 Nka na ụzụ nke Elephone P8 Mini
Ma nke ahụ bụ na ọnụ nwere ụdịrị arụmọrụ mana ọ na-eju anya. Iji malite, n'agbanyeghị ọnụahịa ya siri ike, Elephone P8 Mini nwere aru nke eji aluminom mee nke na-enye ngwaọrụ dị ezigbo mma. Mgbe ị naara ekwentị, ị chọpụta na okpokolo agba ndị gbara ya gburugburu bụ nke polycarbonate, mana ekwentị ahụ dị mma nke ukwuu ma na-enye mmetụ dị mma yana ị na-ele anya dị ka ọnụ ahịa dị elu na nke mbụ.
Na ihu anyị na-ahụ igwefoto n'ihu, na mgbakwunye na bọtịnụ capacitive atọ dị na ala. Dị ka a tụrụ anya na ọnụ ọgụgụ nke ụdị a, ekwentị nwere ole na ole nnukwu okpokolo agba.
Ugbua n'akụkụ aka nri nke ekwentị bụ ebe anyị ga-ahụ igodo njikwa olu na njedebe na bọtịnụ bọtịnụ. Dị ka etiti ahụ, bọtịnụ a bụ nke polycarbonate ọ bụ ezie na mmetụta mgbe emetụrụ ya aka siri ike.
Gwa na ala bụ ebe ndị otu Elephone na-ahụ maka ọdụ ụgbọ USB micro na mmepụta iji jikọọ ekweisi 3.5 mm. N'ikpeazụ kwuo na akụkụ aka ekpe dị ọcha.
Ke ofụri ofụri ekwentị ọ nwere ezigbo mma risịrị maka ọnụahịa ya ọ bụ ezie na m ga-ekwu na nhazi nke Elephone P8 Mini a anaghị apụta ma ọlị ma e jiri ya tụnyere ndị asọmpi ya. Ekwentị nwere ụdị ọnụọgụ ọnya, ọ bụ ezie na anyị enweghị ike ịjụ oke maka ịtụle ọnụ ahịa ya.
Nka na ụzụ nke Elephone P8 Mini
Nlereanya P8 Obere
Usoro njikwa Android 7.0 Nougat
Ihuenyo 5 Inch IPS Capacitive na Full HD 1920 x 1080 mkpebi
Nhazi Asatọ-isi Mediatek Helio P10 (Cortex-A 53 cores anọ na 1.8 GHz na cores anọ Cortex-A53 na 1 GHz)
RAM Ntọala nchekwa 4 GB
Nchekwa n'ime 16 ma ọ bụ 32 GB dabere na ihe atụ a na-agbasawanye site na MicroSD ruo 256 GB
Igwefoto na-aga n'ihu 13 MP + 2 MP igwefoto igwefoto abụọ / autofocus / Optical image stabilization / nchọpụta ihu / panorama / HDR / dual-tone LED flash / Geolocation / Ndekọ vidiyo na ogo 1080p
Igwefoto ihu 16 Megapixels
Atụmatụ ndị ọzọ akara mkpisiaka ihe mmetụta / accelerometer / dara imecha / FM redio
Batrị 2.850 mAh na-enweghị ike iwepu ya
Akụkụ X x 14.36 7.40 0.81 cm
Ibu ibu 133 grams
Ahịa 110 euro na ịpị ebe a
Teknụzụ anyị nọ n'ihu ekwentị ntinye uzo - ọkara. Elephone ahọrọla otu MediaTek kacha mara amara iji weta ekwentị gị na ndụ. Anyị na-ekwu maka MediaTek MT6750 nke bụ mmata ochie na etiti. SoC a, nke a na-akwado site na Mali T860 GPU tinyere 4 GB nke ebe nchekwa RAM, na-ekwe nkwa ịkwaga egwuregwu ọ bụla ma ọ bụ ngwa ọ bụla na-enweghị nsogbu, n'agbanyeghị ole eserese ha chọrọ.
Anwalewo m ọnụ ahụ maka izu abụọ na mmetụta dị mma na nke a,ekwentị na-agagharị na-enweghị nsogbu ma ọ naghị enye nsogbu nsogbuỌ bụ ezie na m ga-ekwu na achọpụtara m na oge nchịkọta nke egwuregwu ụfọdụ na-achọ ihe dị elu chọrọ bụ nke dị elu karịa Elephone P8 Mini.
Nsonye nke ihe mkpịsị aka na ekwentị bụ ihe ijuanya. Eziokwu bụ na ọ daala m ma na m tinyelarị mkpịsị aka m aka ịmata akara mkpisiaka ahụ, mana ekwentị dị n'akụkụ a arụ ọrụ karịa ka a tụrụ anya ya.
Ke ofụri ofụri Elephone P8 Mini na-enye ezigbo arụmọrụ, karịa ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na ekwentị ahụ na-erughị euro 150. Site na ihe m nwere ike ịnwale, ọnụ a ga-enwe ike ịmegharị egwuregwu ọ bụla ma ọ bụ ngwa ọ bụla n'ihi ya ọ bụ nhọrọ ị ga-echebara ma ọ bụrụ na ị na-achọ ọnụ ala gam akporo ekwentị ebe ọ ga-ezute atụmanya nke onye ọrụ ọ bụla.
Batrị nke Elephone P8 Mini rụnyere na-enye karịa arụmọrụ zuru oke, na-eru ụbọchị eji na-enweghị nnukwu nsogbu. A na-atụ anya na ekwentị ọ bụla ka ị nwee ike ijide n'aka na ọnụ ga-adịgide otu ụbọchị n'enweghị nsogbu, mana enweghị usoro ngwa ngwa na-akwụ ụgwọ ngwa ngwa.
Elephone P8 Mini nwere ihuenyo mebere Nkọ 5.0-anụ ọhịa IPS panel nke na-enweta mkpebi nke 1080 x 190 pikselụ. Ihuenyo nwere ogo zuru ezu nke nkọwa ma na-enye agba agba, ekele maka ihu igwe ihuenyo anabatara, ọ bụ ezie na ọnọdụ nchapụta adịghị mma.
O nwere ezigbo nlele nlele na ekwentị nwere ogo nchapụta nke na-enye ya ohere iji ya enweghị nnukwu nsogbu, yabụ ịbụ ọkwa ntinye, ọrụ na ngalaba a karịrị ezuru.
O doro anya na ngalaba ese foto bụ nke kachasị mma Elephone P8 Obere, karie ma ọ bụrụ na anyị echebara ọnụego mgbanwe ya. Ga-ahụ ekwentị ọzọ na ahịa na zuru tran ese foto na ndị dị otú ahụ a ezi uche price.
Iji malite, igwefoto ya bụ isi na-eji sistemụ igwefoto abụọ, nke na-emewanye ejiji, nke nwere ihe mmetụta. de 13 megapixels esonyere megapixels abụọ ọzọ. Nhazi a dị mma iji nweta foto kacha mma na gburugburu gbara gburugburu(Cheta na ekwentị nwere ọkụ ọkụ), na mgbakwunye na usoro nhazi nke na-ebelata mkpọtụ site na ịnweta data ndị ọzọ na ogbugba ọ bụla.
Ọ bụ nnukwu ihe ijuanya anyị hụrụ ya na igwefoto ya nke nwere 16 ihe mmetụta megapixel, nke na-eme ka mma dị elu mgbe ị na-ewere onwe gị. Ekwesiri ighota na ha agbakwunyela oru oku na ihuenyo nke na-enye ohere ihe osise onwe onye na gburugburu oriọna na-adighi nma.
Elephone emeela nnukwu ọrụ na Elephone P8 Mini a, ekwentị nwere ọnụ ọgụgụ knockdown nwere ụfọdụ njirimara teknụzụ, ọkachasị maka igwefoto dị ike n'ihu, nke ga-ezute karịa atụmanya nke onye ọrụ ọ bụla.
Elephone P8 Obere
Ọ na-enweghị a ngwa ngwa Nchaji usoro
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Elephone P8 Mini, nyocha na echiche
International giveaway: nweta LG G6 n'efu
Otu esi eme ka egwu Andy na gam akporo gi